Bogga ugu weyn|Kobcinta Dhaqaalaha
Abuuritaanka barwaaqo, dhaqaale waara waxay barbar socotaa dhismaha bulshooyinka heer caalami ah. Midna kan kale ma jiri karo. Maaddaama ay tahay wakaaladda horumarinta dhaqaalaha gobolka, Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington waxay diiradda saareysaa xoojinta warshadahayada muhiimka ah, ballaarinta ganacsiga caalamiga ah, ka caawinta ganacsiyada yaryar kobcinta, tababar siinta jiil cusub oo shaqaale ah, siinta helitaanka maalgelinta, iyo taageeridda shaqada xaafaddayada. la-hawlgalayaasha horumarinta dhaqaalaha dhammaan 39-ka degmo ee Washington.
Istaraatiijiyadeena qeybta muhiimka ah waxay diirada saareysaa warshadaha la bartilmaameedsanayo ee kicin kara kobaca degdegga ah, oo ay ku jiraan aerospace, beeraha iyo soo saarista cuntada, tikniyoolajiyad nadiif ah, tikniyoolajiyadda macluumaadka iyo isgaarsiinta, sayniska nolosha / caafimaadka adduunka, badaha, wax soo saarka keymaha, iyo militariga iyo difaaca.
Shaqo qorista iyo Ballaarinta
Qeyb muhiim ah oo ka mid ah istiraatiijiyadeena horumarinta dhaqaalaha ayaa ka caawineysa shirkadaha adduunka oo dhan inay ogaadaan awooda ganacsi ee Gobolka Washington. Kooxdayada horumarinta ganacsiga waxay si dhow ulashaqeeyaan go'aan qaadayaasha si ay uga caawiyaan ganacsiyada inay doortaan Washington ballaarinta iyo dib udajinta.
Ganacsiyada yaryar ayaa dhaqaajiya dhaqaalaha gobolka. Si looga caawiyo inay guuleystaan, Wasaaradda Ganacsiga waxay siisaa barnaamijyo kala duwan oo loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha gaarka ah ee ganacsiyada yaryar ee gobolka, laga bilaabo waxbarashada iyo gargaarka farsamada ilaa u diyaargarowga musiibada iyo qalabka soo kabashada.
Deeqaha Ganacsi iyo Deymaha
Waxaa loogu talagalay inay siiso maalgelin muhiim ah ganacsiyada laga yaabo inaysan awood u lahayn inay galaan marinnada dhaqameed ee caasimadda, Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington waxay qorsheysay barnaamijyo cusub oo lagu hurinayo ballaarinta iyo koritaanka.
Ganacsigu wuxuu u fidiyaa barnaamijyo cimilo-cimilada ganacsiyada, deeqo si looga dhigo dhismayaasha dadweynaha kuwo tamar badan hufan iyo istiraatiijiyad maaliyadeed oo loogu talagalay aasaasida cilmi baarista tikniyoolajiyadda nadiifka ah iyo horumarinta si loo dheellitiro astaanta tamarta gobolka loona yareeyo raadkeeda kaarboonka
Wasaaradda Ganacsiga waxay si dhow ula shaqaysaa la-hawlgalayaasheeda horumarinta dhaqaalaha ee ku baahsan Washington, oo ay ku jiraan 34 ururro horumarineed oo la shaqeeya. Wada-hawlgalayaashani waxay bixiyaan xiriir muhiim ah oo u dhexeeya istiraatiijiyadaha horumarinta dhaqaalaha ee maxalliga ah, degmada, gobolka iyo gobolka waxayna muhiim u yihiin dhismaha bulshada iyo kobcinta dhaqaalaha.
Bilaabida Websaydhada Washington waxay u fidisaa kaalmo farsamo iyo ilaha ganacsatada iyo bilowgaba. Barnaamijku wuxuu kaloo isku duba ridayaa dhacdooyinka Toddobaadka Hal-abuurka Ganacsiga Caalamiga ah ee gobolka, sidoo kale wuxuu kormeerayaa barnaamijka dhirta dhirta ee gobolka iyo istiraatiijiyadda horumarinta dhaqaalaha reer miyiga.